धैर्य गगन, धैर्य ! - व्यंग्य - प्रकाशितः पुस ९, २०७४ - नेपाल
धैर्य गगन, धैर्य !
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले एक अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि आक्रोश पोखेछन् । भर्खर सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा लज्जाजनक हार हुनुमा नेतृत्वलाई दोष दिँदै उनले सभापतिलगायत बूढा नेताहरूले तुरुन्त राजीनामा दिएर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्त्व हस्तान्तरण गरेर आराम गर्न भनेका छन् । स्वेच्छाले राजीनामा नदिए युवा कांग्रेसहरूलाई संगठित गरेर पार्टीमा हस्तक्षेप गर्नेसम्मको धम्की दिएछन् । कत्रो आँट त यिनको !
गगनको कडा मन्तव्यपछि अबचाहिँ पार्टीमा ठूलै भुइँचालो आउने भयो भनेर कान थापेर बसेकाहरू अहिले निराश छन् । उनले दिएको धम्की देउवाजीको त कानमै परेन, कानमा पर्नेहरूले पनि अर्को कानबाट उडाइदिए । दुनियाँलाई थाहा छ, ज्योतिषीले शेरबहादुरजीलाई सातपटक प्रधानमन्त्री र आजीवन पार्टी सभापति हुन्छौ भनेका छन् । सभापतिजीका ललाटमै लेखेको कुरा एउटा फुच्चे केन्द्रीय सदस्यका धम्कीले हल्लिन्छ त ? देउवाजी अब तीनचोटि प्रधानमन्त्री नहोउन्जेल बरू गगनजीहरूले चाहिँ आराम गरे हुन्छ ।
खसोखास कुरा त देउवाजीले राजीनामा दिनुपर्ने कारणै छैन । एक त ज्योतिष विज्ञान अनुसार यसपालि कांग्रेसको भाग्यमै हार्ने लेखेको थियो, हार्‍यो । दोस्रो कुरा, कांग्रेस पो हार्‍यो, देउवा हारेका छैनन् । अनि, किन दिने राजीनामा ? देउवाजीकै कारणले पार्टीले हारेको पनि होइन । वामपन्थीहरूद्वारा हराइएको हो । तिनीहरूले गठबन्धन नगरेको भए कांग्रेस हाथ्र्यो ? अनि, कांग्रेसलाई हराउन मुख्य भूमिका खेल्ने ओली र प्रचण्डको राजीनामा माग्ने कि तिनीहरूका विरुद्ध लड्दा–लड्दा थाकेर लखतरान भएका आफ्नै सभापतिको माग्ने ? भाग्यमा अलिकति घुनपुत्ली लागेकै बेला यसरी अग्रजहरूमाथि आक्रमण गर्न मिल्छ युवा हो ?
देउवाजी स्वयं कत्रो पीडामा छन् । उनले आफू जिते, आफ्नै धर्मपत्नीलाई खोइ जिताउन सके ? देउवाजीले प्रधानमन्त्रीकै दाबेदारी गर्न लगाएर चुनावमा उठाए । आखिर सांसद पनि भइनन्, भएको छाया प्रधानमन्त्री पद पनि गयो । पारिवारिक दु:खको यो अवस्थामा सहानुभूति दिने कि राजीनामा माग्ने ? बरू, आरजु म्यामले बूढाको राजीनामा मागेको भए सुहाउँथ्यो ।
देउवासँग जोडेर गगनले रामचन्द्रजीको पनि राजीनामा मागेछन् । बूढो शरीर घिस्याउँदै छातीभरि आफ्नै हारको पीडा र आँखाभरि आँसु बोकेर गाउँ घुमिरहेको खबर आइरहेको छ, तनहुँतिरबाट । ती पीडित बूढासँग के राजीनामा माग्छौ गगन ! पाप लाग्ला ! अझ उनी त नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा अडिग नेता । एकपल्ट पनि प्रधानमन्त्री नभई यो नरचोलाबाट कसरी मोक्ष प्राप्ति होला त भनेर बाध्यतावश यसपालि पनि चुनाव लडेका, त्यो पनि पराजित भए । यस्तो शोकको बेलामा राजीनामा मागेर बाबुसरहका बूढालाई थप पीडा नदेऊ युवा नेता हो !
गगनको ढिपी छ, बूढाहरूले नेतृत्व छोडेर आराम गरून् । क–कसले नेतृत्त्व छाडे भने युवाहरूको पालो आउँछ, हिसाब गर्नुपर्‍यो नि ! कोइराला परिवारका एकसे एक नेताहरू छन् । सबै सभापति–प्रधानमन्त्रीका दाबेदार छन् । विमलेन्द्रजीहरू छन्, गच्छेदारहरू छन् । गणेशमानजीले त्याग गर्नुभयो भन्दैमा उनका छोरा प्रकाशमानले पनि त्याग गर्नुपर्छ भन्ने कुनै शास्त्रमा लेखिएको छैन होला । महतजीहरू, केसीजीहरू । अरू पनि सयौँ छन् । यी सबैको पालो सकिएपछि युवाहरूमा आइहाल्छ नि नेतृत्त्व । ३०/३५ वर्ष धैर्य गर्नुपर्‍यो नि, त्यसै आत्तिएर हुन्छ ?